हामी यसरी भोक भोक्कै कति दिन सम्म बस्ने ? सहयोगको खानेकुरा लिएर बाड्न जादा देखियो यस्तो दृश्य (भिडियो सहित) – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/हामी यसरी भोक भोक्कै कति दिन सम्म बस्ने ? सहयोगको खानेकुरा लिएर बाड्न जादा देखियो यस्तो दृश्य (भिडियो सहित)
महामारीका कारण लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण दिनहुँ कमाएर भोक मेटाउने विपन्नहरुको जिवन निकै दुखद् छ । सरकारले महामारी फैलने क्रम रोक्न भन्दै निषेधाज्ञा थपिरहेको छ । तर विपन्न र दैनिक ज्यालादारी गरेर कमाउने र त्यसैले भोक मेटाउनेहरुका लागि भने प्रभावकारी कार्यक्रम छैन । जसका कारण उनीहरुको बिचल्ली भएको छ । विपन्न, सुत्केरी र अनाथहरुको बिचल्ली भएको हो ।
उनीहरुले गरेको सहयोगको खाना खान हजारौंको लाइन लाग्ने गरेका छन् । त्यसरी अरुले दिएको सहयोगको खानेकुरा खान आउनेहरु कतिपय धरधरी रोएको देखिन्छ । साना बालबालिका लिएर आएका महिलाहरुको अवस्था निकै दयनिय हुन्छ । पौष्टिक खानेकुरा खानुपर्ने समयमा भोकै बस्नुपरेका बालबालिकाहरुको अनुहार निकै मायालाग्दो देखिन्छ । तर उनीहरुका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम नल्याएको भन्दै आ क्रो शित समेत हुने गरेका छन् ।
कोरोना संक्रमणबाट आज पनि यति धेरै जनाको मृत्यु,
आमा मलाई छिटो लैजानु न गार्हो भैसक्यो भन्दै त्रिभुवन बिमानस्थलबाट हात हल्लाउंदै गएको छोराको उतै मृत्यु, शव पनि उतै जलाइयो, बाआमा रुदै नेपाल फर्किए (भिडियो)